Molybdenum Is Dila, MoSi2 - Goodao Technology Co., Ltd.
Molybdenum disilicide (Molybdenumdisilicide, MoSi2) waa nooc ka mid ah iskuxirka molybdenum silicon, maxaa yeelay labada gacan ee atomiga ah wey isku egyihiin, korantada ayaa u dhow, sidaa darteed waxay la mid tahay dabeecada birta iyo dhoobada. Meel dhalaalaysa ilaa 2030 ℃ iyo koronto tabinta, lakabka passivating silicon dioxide la samayn karaa dusha sare ee heerkulka sare si looga hortago qayilo dheeraad ah. Muuqaalkeedu waa midab buluug ah oo midabkiisu cawl yahay, oo laga soo dheegtay qaab-dhismeedkeeda muraayadaha afar geesoodka ah, oo waxa kale oo jira qaab-dhismeedka meyliska ee laba-geesoodka ah laakiin aan degganayn.Ka milma inta badan asiidhyada, laakiin lagu milmi karo nitric acid iyo hydrofluoric acid.
MoSi2 waa nooc mesophase ah oo leh maadada silicon ee ugu sareysa nidaamka aluminiumka mo-SI.Waa nooc ka mid ah maaddada heerkulka sare leh oo leh waxqabad wanaagsan. cufnaanta (6.24g / cm3); Isugeynta balaadhinta kuleylka (8.1 × 10-6K-1); Dhaqdhaqaaqa korantada oo wanaagsan; Heerkulka kala-guurka ee qulqulaya qulqulka sare (1000 ℃) ee ka hooseeya dhoobada - sida jajabka adag. 1000 ℃ ka sarreeya birta sida MoSi 2, molybdenum iyo silikoon waxay kuxiran yihiin xirmooyinka macdanta, silikoon iyo silikoon waxay kuxiran yihiin xirmooyin iskudhaf ah, iyo mlybdenum disilicide waa dhaldhalaalka 'quadripartite crystal gril' oo aan lagu milmin guud ahaan asiidhyada macdanta ah (oo ay ku jiraan aqua aqua), laakiin lagu milmi karo isku dar ah nitric acid iyo hydrofluoric acid, waxay leedahay awood heer-kulka wanaagsan ee antioxidant-ka waxayna awood u leedahay waxaa loo isticmaali karaa heer-kulka sare (& LT; Cunsurka kuleylka ee ka shaqeeya jawiga oksidheer ee 1700 In. Marka heerkulka aaladda kululaynta ay ka sarreyso 1700 ℃, waxaa la sameeyaa filimka difaaca ee SiO2, kaas oo dhumucdiisu tahay 1710 ℃ oo la isku daray
SiO2 ku daadi dhibcaha la shubay Sababtoo ah dhaqdhaqaaqa kordhintiisa dusha sare, waxay lumineysaa awoodeeda difaac. Marka loo eego ficilka oksida, marka walxaha si isdaba joog ah loo isticmaalo, waxay sameysaa filim ilaalin ah mar kale.Waa in la ogaadaa in oksidheer xoog leh awgeed heerkulka hooseeya, cunsurka lama isticmaali karo muddo dheer 400-700 dis .Molybdenum disilicide waxaa lagu dabaqaa aagagga qalabka wax lagu dahaadho ee ka hortagga oksidhiska heerkulkiisu sarreeyo, walxaha kuleylka korontada ku shaqeeya, filimada korantada isku dhafan, qalabka dhismaha, xoojinta qalabka isku dhafan, xirtaan qalabka u adkaysta, qalabka isku xirka ee dhoobada dhismaha, iwm. Waxaa loo qaybiyaa warshadaha soo socda:
1) Warshadaha kiimikada tamarta: Curiyeyaasha kuleylka korontada, kuleyliyaha kuleylka kuleylka ee rakibida atomikada, gaaska gubta, heerkulbeegga heerkulka sare iyo tuubooyinkooda difaaca, iskudhafka weelalka dhalaalaya (oo loo isticmaalo dhalaalida sodium, lithium, lead, bismuth, tin iyo metal kale) ).
2) Warshadaha Microelectronics: MoSi2 iyo silsiladaha kale ee birta diidan ee Ti5Si3, WSi2 iyo TaSi2 waa musharixiinta muhiimka ah ee GATE iyo filimada khafiifka ah ee isku xidhka LSI.
3) Warshadaha Aerospace: Si ballaaran oo qoto dheer ayaa loo baaray loona adeegsaday sida heerkulka sare ee maadada antioxidant-ka. Gaar ahaan aaladaha matoorrada marawaxadaha, sida garbaha, qalabka wax lagu shido, gubi, biiyaha iyo qalabka wax lagu xiro.Molybdenum disilicide wuxuu noqday meesha ugu dambeysay ee cilmi baarista qalabka dhismaha qaab dhismeedka sida qalabka qaabdhismeedka loo isticmaalo qaybaha heerkulka sare, gubidayaasha gaaska, nozzles, miirayaasha heerkulka sare iyo shumacyada dhimbiil ee duulimaadyada iyo gaaska gawaadhida. Caqabada ugu weyn ee codsigan ayaa ah jajabka weyn ee heerkulka qolka iyo xoog hooseeya heerkulka sare. Sidaas awgeed, heerkulka hooseeya ee adkaynta iyo xoojinta heerkulka sare ee molybdenum ayaa ah tiknoolajiyadaha muhiimka u ah codsigeeda sida qalabka qaab dhismeedka.Natiijooyinka ayaa muujinaya in isku darka iyo isku darka ay yihiin habab wax ku ool ah oo lagu hagaajiyo adkaanta iyo xoogga heerkulka sare ee molybdenum ee lagu diido heerkulka qolka. Qaybaha sida caadiga ah loogu isticmaalo moly Daawada bdenum disilicide alloying ayaa ah kaliya silsilado yar yar oo leh isku mid ama isku mid ah iskudhafka muraayadda molybdenum, sida WSi2, NbSi2, CoSi2, Mo5Si3 iyo Ti5Si3, kuwaas oo ay ka mid tahay WSi2 waa tan ugu fiican. sida muuqata way luntay, codsiguna wuu xadidnaa.Waxaa la cadeeyay in molybdenum disilicide ay leedahay xasillooni kiimikaad oo wanaagsan iyo karti leh dhamaanba wakiilada xoojinta dhoobada (sida SiC, TiC, ZrO2, Al2O3, TiB2, iwm).
Sidaa darteed, habka ugu wax ku oolka badan ee lagu hagaajin karo astaamaha farsamo ee molybdenum disilicate waa in la diyaariyo molybdenum disilicate composite.
Hore: Niobium Silicide, NbSi2
Xiga: Dilka Ferro, FeSi2
Budada silica ee Molybdenum
Warshadaha budada silicinta Molybdenum
Warshadda budada siliciga ah ee Molybdenum
Soo-saare budada silly molybdenum
Soosaarayaasha budada silicinta Molybdenum
Molybdenum budada siliciska Qiimaha
Quote Molybdenum budada silicide